भुईँकाे सत्य भर्सेस भर्चुआलिटी – SUDARSHAN NEPAL
Posted on December 25, 2017 December 25, 2017 by sudarshan nepal
भुईँकाे सत्य भर्सेस भर्चुआलिटी
शिर्षक जस्तै सामान्य छैन याे कथा ! याे कथामा आधुनिक युवापुस्ताकाे एउटा असामान्य प्रवृत्ति र मनाेदशा देखिन्छ ! याे कथा अपुराे र अस्पष्ट छ ! अपुराे यसकारण कि याे कथामा लेखकले भन्न र लेख्न चाहे जस्ताे सकेकाे छैन ! अस्पष्ट यसकारण कि याे भम्र र सत्य माथिकाे प्रयास हाे, जहाँ भ्रमलाई चिर्न सजिलाे छैन !
प्रेम जिवनकाे महत्वयुक्त सत्य हाे, याे त सर्वविदितै छ ! र सत्य याे पनि हाे कि याे हरेक पात्र सगँ लुप्त या व्यक्त तरिकाले रहेकाे हुन्छ ! सामाजिक संजालमा युवापुस्ताकाे अनाैठाे लगाव र यस बाट वास्तविक जिवनमा हुने स्वभाविक या अस्वभाविक असर भित्रकाे एउटा कथा वा अध्याय हाे ‘भर्चुअल प्रेम’ !
‘भर्चुअल प्रेम’, ति पात्रहरु बिचकाे प्रेम हाे, जसले एक अर्कालाई शब्दकाे हिर्काईले मात्र छाेएका हुन्छन् ! शब्द व्यञ्जन भाव अभिव्यक्तिकाे माध्यम हाे ! याे भन्दै गर्दा शब्द मात्रैले पनि वास्तविक जिवन माथि एउटा खाली मैदानकाे सिर्जना गर्दछ ! जहाँ हामिले भर्चुअल संसारमा भेटिएका अनेक सगँ अनेक परिदृश्यमा भुमिका खेलिरहेका हुन्छाै ! जहाँ हामि हरेककाे मानसपटलमा स्वभाविक रुपमा यि बिषयहरु घुमिरहेका हुन्छन् ! काेहिकाेहिमा अस्वभाविक रुपमा पनि यसकाे ईन्फेक्सन रहेकाे हुन्छ !
जुन अर्थयुक्ति रुपमा साच्चैँ नै पागलपनकाे क्रिया हाे ! पागलपन यसकारण कि जुन मानिसलाई देखेकाे र भेटेकाे छैन वा जुन मानिस स्वार्थप्रयाेगका निम्ति मात्रै एकअर्काका परिपुरक बन्न तयार हुन्छन् ! वास्तविक जिवन र भर्चुअल रियालिटी फरक हुन्छ ! याे मेराे व्याख्याकाे तर्क हाे !
मुख्यत झुट र अपार्दशी स्वरुपमा अडिएकाे सम्बन्ध नै आजकाे समाजकाे तथ्य हाे !
उमेरले भर्खर चाैध बाट पन्ध्र टेकेकी एक युवतीले स्टाटस् मार्फत लेखिन्,
⁃	जिन्दगीमा यति सानैमा यति ठुलाे पिडा म कसरी भाेगुँ ! बेबी म तिमि बिना कसरी बाच्नेँ ! म कसरि भुलुँ तिमिलाई !
( स्पेलिङ बिग्रिएकाे राेमन नेपालीमा लेखिएकाे याे स्टाटस )
⁃	बिहे गरेर अमेरिका आएकाे एक साथी, जाे आफ्नी श्रीमती हुदाँहुदैँ पनि फेसबुक बाट अर्की केटीलाई गर्लफ्रेन्ड बनाएकाे दावी गर्दै कुराकाे सुरुवात गर्छ ! र भन्छ, मलाई त त्यसले सार्है माया गर्छे ! तर दुर्भाग्य म पनि त्याे केटीकाे साथि हुन्छु ! र म याे तथ्य जान्दछु कि उसकाे प्रेमीकाले उता मैले चिनेकै अर्काे पात्र सगँ अहिले पनि सम्बन्ध बढाईराछे !
यि माथि दिईएका तथ्यहरु नितान्त मैले देखेका पात्रहरुकाे हाे ! जाे आज आफु र आफ्नाे कथाले मेराे याे शिर्षक माथि फिट भए !
एक्काईसौं शताब्दीकाे याे नविन सिर्जना र प्रयाेग बाट जुन रुपले समाज अगाडी बढिरहेकाे छ ! त्यसले सकारात्मक पक्षहरुका साथै नकारात्मक पक्षहरुलाई पनि सगैँ बाेकेर हिडेकाे छ ! सामान्य रुपमा छिटाेछरिताे रुपमा सुचना आदानप्रदानकाे लागि बनाईएका यस्ता साेसियल साईटहरु बाट आज दिनुहुँ जसाे कथाहरु निर्माण हुन्छन् त्याे पनि वास्तविक जिवनमा अप्राकृतिक तवरले ।
क्षणिक मनाेउत्साह र साैन्दर्य देखाउनकाे लागी एक युवतीले एउटा तस्बिर वालमा राख्दै क्यापसन् लेखिन् ! ” म झरि जसरी नै झर्ने झरना हुन चाहान्छु ”
लगत्तै एकैछिनमा उन्माद पुर्वक कमेन्टबक्समा कमेन्टहरु झर्न थाले ! ति कमेन्टहरुले समाजले निर्माण गरेका संस्कार र नियमका रेखाहरु ताेडेका थिएँ ! भलै ति अक्षरहरु शब्दमा मात्र थिए ! तस्विरलाई याैनाकर्षणकाे ध्येय बमाेजिम केलाईएकाे थियाे ! मेराे मन नमिठाे सगँ कुँडियाे ! अवाक् भएँ ! हामि के हासिल गर्नका निम्ति याे हद सम्म गिर्दैछाै ! मैले बुझ्न सकिरहेकाे थिईन् ! म पनि यहि संजालकाे एक चालु सदस्यकाे हैसियतले आफैलाई नियाल्दै थिएँ !
पहिले र अहिले जिवनमा पक्कै पनि केहि नमिठाे राेषकाे अशं थियाे !
आफ्नाे प्रसंशा र व्यक्तित्वकाे व्याख्याकाे बारेमा हरकाेहि मानिस लाेभी हुन्छ, तर त्यसमा पनि एउटा निश्चित परिधि रहेकाे हुन्छ, के हद र कति हद भन्ने ! लाईक,कमेन्ट आदर्श नै हाम्राे ध्येय हाे त ! यदि हाे भने त्याे के काम र कति फाईदाकाे ! मनन् गर्नुस्त !
तर हामिलाई चुक्नु छ भने जस्ले जे भनाेस्, हामि चुकिरहन्छाै ! हामिमा खाेक्राे व्यक्तित्व देखाउने लालसा छ, हामि देखाईरहन्छाै ।
सामाजिक संजालमा देखिएका र देखाईएका पात्रहरु हुन्छन् ! जुन भिन्न भिन्न अस्तित्व काे कारण बाट जन्म लिन्छन् ! यसमा फेक नाम राखेर बनाईएका आईडीहरु, ह्याण्डलहरु पर्दछन ! जसकाे आफ्नाे छुट्टै पहिचान र दायित्वबाेध हुदैन ! पहिचान नहुनुकाे फाईदामा उसले आफ्नाे वास्तविक जिवन प्रतिकाे रुखाे भाव फेक मार्फत प्रकट गर्दछ ! अनि त्यसले एक हुल उपद्र्या सगँ मिलेर कसैलाई नंग्याईरहदाँ हामि बडा गर्व सहित तिनिहरु माथि तारिफ फ्याक्छाैँ ! के तिनिहरु माथि त्याे हक छ त ! जाे मुला आफ्नाे नाम भर्चुअल समाजमा लुकाएर शब्दहतियार चलाउछँ, त्याे कसरी जायज ! यदि सहि आशय हाे भने त्याे पनि जायज हुने बिषय रहला् तर गलत प्रयाेजनमा !
व्यक्तित्व निर्माण, सुचनाकाे सहि सम्प्रेषण, सहयाेग, बिचारवादका आदीका लागी यस्ता सामाजिक संजालहरु बन्नुकाे कारण हाे ! सकारात्मकता प्रति हाम्राे समाज अघि बढ्नुकाे साटाे झन् नकरात्मकताकाे दलदल तिर फस्दैछँ !
परिस्कृत या स्विकृत ! तर वास्बिकता नै यहिँ हाे ! जसले हामिले भाेली बनाउने भविष्य सम्म पनि हामिलाई पछ्याउछ ! आजकाे खाेक्राे आदर्श र मनाेगत कल्पना हाम्रा लागी भाेली अभिसापकाे विगत रहन सक्छ ! त्यसैले हाम्राे भाेली बनाउनका लागी हामिले आजकाे वर्तमानमा केही हद ननाघाैँ ।
Previous Article एकादेशको कथा
Next Article 50 AMAZING FACTS ABOUT NEPAL